कसरी फायर गर्ने? फायरि is भनेको के हो यसको मतलब
क्षमा याचना कसरी लेख्ने
खारेजको सही हिज्जे
यो सम्भव छ कुनै पनि भाषामा लेखिएको। जहाँसम्म भारतीय वर्णमाला र ल्याटिन वर्णमालामा क्यारेक्टरहरू भिन्न छन्, ती अभिव्यक्ति र अर्थको आधारमा एक समानार्थी बिन्दुमा भेट्न सक्छन्। यस कारणका लागि, केही अनुवाद कार्यक्रमहरू प्राविधिक रूपमा कार्य गर्न सक्दछन्। तपाईं हाम्रो साइटमा भाषा विकल्पहरू प्रयोग गरेर फरक भाषामा शव्दको हिज्जे सिक्न सक्नुहुनेछ।
हामी टेक्नोलोजीको युगमा बाँचिरहेका छौं, हामी सबैको फोन वा ट्याब्लेट छ। धेरै भ्रामक कारकहरू कुनै पनि समय, कहिँ पनि देखा पर्न सक्छन्। अहिले पनि हामी उच्चारण र धेरै गलत शब्दहरू लेख्छौं जुन हामीलाई सहि थाहा छ। तर दुर्भाग्यवस, यी शब्दहरू हामी सांस्कृतिक विकृतिको कारणले नबुझी लेख्छौं। आज हामी यसलाई प्राय जसो केही चलचित्र वा घटनामा हेर्छौं जसलाई हामी युट्युबर्स भन्छौं, होशियार हुनुहोस्।
विकासशील टेक्नोलोजी र मोबाइल लतका साथ, हाम्रा बच्चाहरू या त हामीले प्रयोग गर्ने शब्दहरू जान्दैनन् वा बिर्सदैनौं। यसले आपसमा नयाँ शब्दहरू निकालेर नयाँ भाषा पनि सिर्जना गर्दछ। हाम्रो साइट हाम्रा बच्चाहरूका लागि शब्दहरू ठीकसँग बोल्न र लेख्नको लागि एक मार्गनिर्देशन हो। हाम्रो भाषामा प्रवेश गर्ने नयाँ शब्दहरू अवश्य नै हुन्छन्, तर सावधान होऔं संक्षेप पनि प्रयोग नगरौं जसको कुनै अर्थ छैन।
यो निकालिनु भनेको के हो?
कसरी फायर गर्ने?
इस्पात गर्न सक्षम हुनुहोस्
व्यवस्थित गर्न सक्षम हुनु